Life The Good halkan waa! — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Charlene I'maCharity Hamilton • August 19, 2013 at 8:45 waxaan ahay • Reply
Mid ka mid ah wax ka badan Trip, ha aad qabto wax soo jeedin ku saabsan sidii loo jebin galay BIZ ah, Waxaan jecel gabay, waayo, Sayidka oo lahaa jecel yahay in la isticmaalo hab u xoogga badan inay injiilka dadka la wadaagaan iyada oo aan music. Laakiin, haddii ay taasi ma aan shaqo Waxaan fahamsanahay sababta oo ah waxaan rabaa in aan ku nool yihiin doonista kaamil ah ahu ma anigaa iska leh! Ilaah ammaan! :D
Mikeyla Victoria Arellano • August 19, 2013 at 8:46 waxaan ahay • Reply
Sidee baad maamula wax walba oo aad samaysay isagoo si dhalinyarada iyo ilaalinta iimaanka?
Waxa ay u muuqataa sida meel kasta maalmahan aad jeesan jiro qof leh haddii aanad samayn karin sonething ama aad u wanaagsan oo ku filan si ay u sameeyaan ma tahay.
Sidee ayaad ka heli oo dhan aflagaada xun ee la soo dhaafay iyo waxa ay ka dhigi doontaa sida a si fiican u yaqaan Christian Caanka ah ee dunida oo muusiko ah, waxaynu og nahay maanta?
Charlene I'maCharity Hamilton • August 19, 2013 at 8:46 waxaan ahay • Reply
dhab ahaantii waxaan jeclahay album this waad ku mahadsan tahay qaadashada music in ammaanaa sayidkii, oo waa farxad leh in ay dhagaystaan ​​dhallinyarada. Waxaan ahay hooyo keli ah 4 da ' 16, 14, 11, iyo 4! Waxaan aad dhegaysato music ay la socdaan artist kale oo kala duwan oo rajaynaya in ay i caawin doona inaan injiilka ku carruurtayda aan la wadaagno iyo ku tusin in ay laf Masiixa ma aha caajis lolz oo aan dadka kaliya jir ah waxaa lagu badbaadiyey. Ma dhahayo waxaan ahay jir, Weli waxaan malaynaynin inaan dhalinyarada iyo door bidaan in ay dhegeystaan ​​hip hop, iyo naf neo. Anyways,kaliya doonayaa inaan u mahadceliyo jidaynayey Ilaah adiga iyo tayo isticmaalaan si ay ammaan iyo gaaraan dad aad u badan oo da 'iyo jinsiyadaha oo dhan. Ilaah ammaan
Daniel • August 19, 2013 at 8:46 waxaan ahay • Reply
Ammaana Bro Rabbiga, Waxaan kaliya rabaa inaan joojiyo by at aad page oo kaala talin in wax walba oo aad shuqulka waa waayo, maamuus iyo ammaanu ha of our badbaadiye Jesuchrist!!! Bro in Ciise magaca i sheegi idiin ducayso, waayo,, qoyskaaga iyo music, taas oo waa nooc aad u qurux badan si ay u muujiyaan Ciise ee jacaylka xoogga badnaa oo dhan, naxariis, xoog, iyo wixii uu sameeyey noo. joog ilaa, iimaanka ilaa iyo hey…waxaa laga yaabaa in aan u wada samayn kartaa track a sababta aan sheego in ay hadiyad doonayo aan Ciise ayaa i siiyey; Ilaah ha barakeeyo, Aamiin.
Mikeyla Victoria Arellano • August 19, 2013 at 8:47 waxaan ahay • Reply
Waxaan ku raaxaystaan ​​oo dhan ee aad Trip music.
Humdaddy • August 19, 2013 at 8:47 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan aad u dadaala on album this. Lyrically, waa sida dhiirigelin weyn oo aan tukanayay inaan album gaadhi doonaa dhegaha iyo quluubta dad badan oo! Tukanayay aad kuu, Anigu waan aqaan shaqo ayaa barako ee noloshayda!
Jannett • August 19, 2013 at 8:47 waxaan ahay • Reply
Waxaan xusuustaa sida orgi kasta oo yar ku tukanayeen for artist a raabka Christian si aan u lahaa music inay dhegaystaan. Ma in badan ayaan maqli injiilka sida ka badan oo kaliya waxyaalaha Ilaah ku siin karaan ama haddii aanad haysan wax ay tahay sabab wanaagsan oo aad weli Masiix. Your wasaaradda ayaa dhiirigelin dhab ah oo aan jeclahay theme ee album. Inaannu idiin soo ducayno
Ed McCrae • August 19, 2013 at 8:47 waxaan ahay • Reply
Album waa Bro mooska! mid ka mid ah ugu wanaagsan ee aad weli.